Naverina naverina indray ny curfews sy ny saron-tava ao Romania ao anatin'ny firongatry ny COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Romania » Naverina naverina indray ny curfews sy ny saron-tava ao Romania ao anatin'ny firongatry ny COVID-19
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Romania • Safety • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Sekreteram-panjakana ao Romania ao amin'ny minisiteran'ny atitany, izay mitarika ny sampana misahana ny tranga maika (DSU), Raed Arafat
Ao anatin'ny krizy ara-pahasalamana ratsy indrindra hatramin'izay i Romania hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina COVID-19 manerantany.
Ny curfew amin'ny alina sy ny saron-tava tsy maintsy averina ao Romania rehefa nitombo ny raharaha COVID-19.
Manomboka amin'ny 10 ora alina ka hatramin'ny 5 ora maraina dia voarara ny fivezivezen'ny olona rehetra manerana ny firenena.
Ny fahazoana miditra amin'ireo tranom-panjakana rehetra sy amin'ireo hetsika sy hetsika ho an'ny daholobe dia tsy avela ho an'ny olona manana 'taratasy fanamarinana maintso' fotsiny.
Sekreteram-panjakana ao Romania ao amin'ny minisiteran'ny atitany, izay mitarika ny sampana misahana ny tranga maika (DSU), Raed Arafat, nanambara fa ny governemanta ao amin'ny firenena dia mamerina mampiditra ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina sy ny maska ​​amin'ny toerana rehetra.
"Manomboka amin'ny 10 ora alina ka hatramin'ny 5:00 maraina, voarara ny hetsiky ny olona manerana ny firenena," hoy ny sefon'ny DSU nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, milaza ny maningana ny fameperana ho an'ireo nanao vaksiny na vao sitrana avy tamin'ny COVID-19.
Romania eo anelanelan'ny krizy ara-pahasalamana ratsy indrindra hatrizay hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina COVID-19 manerantany.
Manomboka anio dia tsy maintsy atao any Romania ny fanaovana saron-tava fiarovana, na eny amin'ny habakabaka anatiny sy ivelany, na any amin'ny toeram-piasana sy amin'ny fitateram-bahoaka, hoy i Arafat.
Ny fidirana amin'ny tranom-panjakana rehetra ary koa ny hetsika sy hetsika ho an'ny daholobe rehetra dia tsy mahazo afa-tsy ny olona manana 'certificat maitso'.
Ny fepetra fanaraha-maso vaovao napetraky ny manampahefana dia hihatra amin'ny alatsinainy ho avy mandritra ny 30 andro, hoy i Arafat.
Ny toe-draharaha amin'ny areti-mifindra amin'ny Romania niharatsy haingana nanomboka tamin'ny faran'ny volana septambra, tsy ampy ny fandrakofana vaksiny 30 isan-jato fotsiny ary ny tsy fanarahana ny fepetra fiarovana no heverina ho antony lehibe mahatonga ny firongatry.
Tamin'ity herinandro ity, ny firenena eoropeana atsinanana dia nisoratra anarana isan'andro ny otrikaretina COVID-19 vaovao miisa 18,863, ary 574 no maty.